इम्जा तालको पानी घटाइँदै – Akhabar Dainik
इम्जा तालको पानी घटाइँदै
२०७३ असोज ८ गते ५:५९ मा प्रकाशित | काठमाडौं, असोज ८ – इम्जा हिमतालको पानी शनिबारदेखि बाहिर फालिने भएको छ । नेपाली सेनाले निर्माण गरेको निकास (डाइभर्सन)बाट हिमतालको पानी बाहिर फाल्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा हुनसक्ने नोक्सानीतर्फ सचेत रहन जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आग्रह गरेको छ ।
यसबाट इम्जा खोला र दूधकोसी नदी तटीय क्षेत्रमा असर पर्ने बताइएको छ । ती नदीमा हालको भन्दा दोब्बर पानीको प्रवाह हुने चेतावनी विभागले दिएको छ । विभागका महानिर्देशक डा। ऋषिराम शर्माले हिमतालको जोखिम न्यूनीकरण गर्न तालबाट ४० लाख घनमिटर पानी बाहिर निकालिने जानकारी दिए । पानी निकासका लागि सेनाले नहर निर्माण गरेको छ ।
तालको पानी निकास हुँदा तल्लो तटीय क्षेत्रमा पानीको मात्रा बढ्ने भएकाले सबैलाई सचेत रहन आग्रह गरिएको उनले बताए । उनले पानी निकासको काम नियन्त्रित रूपमा गरिएको परीक्षण भएको जानकारी दिए ।
महानिर्देशक डा. शर्माले भने, “तल्लो तटीय क्षेत्रमा नदी किनारका मानिस लुगाकपडा धुने, नुहाउने काम गरिरहेका बेला पानीको मात्रा बढ्दै जाँदा क्षति हुनसक्ने, घाँसदाउरा गर्दा वा गाईभैँसी चराउने काममा लागेकालाई हानि नहोस् भन्न पूर्व जानकारी दिइएको हो ।
तालको पानी शनिबार बिहान ९ बजेबाट बाहिर निकास गरिने विभागले जनाएको छ । पहिलो चरणमा कम्तीमा एक सातासम्म पानी निकास गरिने महानिर्देशक डा. शर्माले जानकारी दिए ।
पानी रोकिएपछि महेन्द्र मञ्जिललाई अप्ठ्यारोचीनले सोध्यो – नेपाल-चीनबीचका सम्झौता अब के हुन्छ ?	ताजा अपडेट